घर वनाउने जग्गा छैन, अनुदान रकम के गर्ने ? |
घर वनाउने जग्गा छैन, अनुदान रकम के गर्ने ?
प्रकाशित मिति :2017-01-09 17:02:27
सडकसँगै रहेको आफ्नो जग्गामा पहिरो देखाउँदै गातीकी कीलामु लामा
सिन्धुपाल्चोक । भूकम्पले घरका साथै पहिरोले वस्ती उजाड वनाएपछि जिल्लाका विकट गाउँमा पुननिर्माणको काम अघि वढ्न सकेको छैन । भूकम्पसँगै वाढी र पहिरो पीडितहरूले आवास निर्माण गर्न सुरक्षित जमिन नभएकोमा पुननिर्माण रोकिएको हो । आवास अनुदानको पहिलो किस्ता पाउनेहरू मध्ये महिला लाभग्राहीले आवास निर्माण ठुलो चूनौति भएको वताएका छन् ।
पहिरोका कारण वस्तीमा जोखिम वढेपछि विकट गाउँ गाती–१ की कल्पना बि क वाह्रविसे वजारको खुर्सानीबारीमा आएर अरुको जग्गामा आश्रय लिएर बसिन् । भूकम्पले पुख्र्यौली घर ढाल्यो । जमिन भासिएर वास नै उठाए पछि उनको परिवार सुरक्षित स्थान खोज्दै खुर्सानीवारीमा आएर वस्न वाध्य बनेको हो । आवास अनुदान पाएपनि घर बनाउने उपयुक्त जग्गा नहुँदा के गर्ने अहिलेसम्म उनको परिवार अन्यौलमा छ । ‘आवास अनुदान त पाईयो, घर वनाउने जग्गा छैन’ कल्पनाले दुखेसो पोखिन्, ‘जग्गा नहुँदा घर वनाउने काम थालेका छैनौं ।’ उनको परिवार जग्गा नहुँदा घर बनाउने चिन्ताले पिरोलिएको छ । भूकम्प लगत्तै आएको पहिरोले खेदेपछि उनीहरूको वासको ठेगान छैन । साहुको खेत कमाएर बि कको परिवारले जिविका चलाएको छ । ‘साहुले यहाँवाट धपाए कहाँँ जाने हो ?’ गातीकी सुमित्रा बि कले भनिन् ‘भूकम्पले घर लुट्यो , पहिरोले वास खोस्यो ।’ उनको परिवार कल्पनाको जस्तै साहुकै खेतको मजदुरीमा पालिएको छ । सीमा क्षेत्रको विकट ग्रामिण भेग गाती–१ मा पहिरोले विस्थापित वनाएपछि वाह्रविसेको खोर्सानीवारीमा आएर वसेका २३ दलित परिवारको विचल्ली छ ।
सीमा क्षेत्रमा वाढीले निम्त्याएको पहिरोदेखि तातोपानीको दुगुनागढी, लिपिङ वजार, गाती, लिस्तिकोट, फुल्पिङकट्टी, मांखाको जुरे, टेकानपुरको फाँटलगायतका धेरै भेगमा पहिरोले विस्थापित वनाएकाहरूको अहिलेसम्म सुरक्षित जग्गा नहुँदा घर वनाउने काम रोकिएको छ ।
सदरमुकामसँग जोडिएका विकट गाउँ सेलाङ, सिम्पालकाभ्रे, स्याउले, गोल्चे, गुम्वा, वतासेका विस्थापितहरूको मर्का उस्तै छ । भूकम्पले घरका साथै पहिरोले वस्ती उजाड वनाएपछि वाँसखर्कमा अरुको जग्गामा वस्तीनै वसाली सकेका छन् । विस्थापित सिविरमा वसिरहेका पीडितहरूले सरकारले सुरक्षित जग्गा देला भन्ने आशमा अनुदानको रकम खर्चेका छैनन् । ‘सरकारले घर वनाउने जग्गा देखाएपछि घर वनाउने हो’ विस्थापित शिविरकी छेमाया तामाङ भन्छिन्, ‘जग हालेपछि दोस्रो किस्ता पाउने भनेको छ, तर जग हाल्ने ठाँउ नै छैन ।’